Rava ny fivarotana IPad, tokony homena tsiny ve ny iPhone 6 Plus? | Vaovao IPhone
Taorian'ny firoboroboan'ny varotra nandritra ny taona maro. Fihenan'ny tsena iPad sy Tablet amin'ny ankapobeny amin'ny isan'ny singa amidy. Mifantoka amin'ny Apple, ny iPad dia niala tamin'ny fananana tsena 33,1% tamin'ny Q4 2013 ka hatramin'ny 28,1% tamin'ny Q4 2014.
Ity dia toa fitomboana ratsy 17,8%, zavatra nolalaovin'i Apple tamin'ny kaonferansa momba ny valiny farany saingy maninona no heveriko fa tokony hahaliana azy ireo izany. Fa maninona no nihena ny varotra iPad? Misy antony maromaro tonga ao an-tsaina.
Ny voalohany amin'izy ireo dia ny an'ny tsingerin'ny fanavaozana. Raha ny iPhone no ovantsika ara-dalàna aorian'ny iray na roa taona, amin'ny tranga iPad dia tsy dia mahazatra loatra izany ary maharitra ela kokoa ny olona. Betsaka ny iPad 2 mivezivezy ary miresaka ekipa iray izay efa manana taona vitsivitsy ao aoriany izahay.
Anton-javatra iray lehibe hafa dia mifandraika amin'ny iOS. Na dia nivoatra tamina taranaka nifandimby aza ny fampitaovana iPad, ny iOS kosa tsy nanaraka làlana mitovy amin'izany. Ho ahy dia very maina foana ny efijery iPad, iza no tsy maniry multitasking efijery fisarahana? Mihombo ny iPad amin'ny lafiny azo atao ary na dia isan-taona aza izy dia mahazo fitaovana vaovao, ny fahaizany mijanona ho mijanona ary tsy misy fanatsarana na inona na inona karazany. Mba hivezivezy amin'ny Internet sy hijerena YouTube, misy takelaka 200 euro manarona ny filan'ny mpampiasa maro.
1 iPhone 6 Plus, ilay vahiny vaovao ao amin'ny fety
2 Apple dia miala amin'ny antso ataon'ny iPad Mini
iPhone 6 Plus, ilay vahiny vaovao ao amin'ny fety
IPad Air sa iPad Mini? Io no fanontaniana maharitra mandrakizay tao amin'ireo forum natao ho an'ny Apple. Mahaliana fa ireo nisafidy ny iPad Mini dia samy mametraka ny fanontaniana ankehitriny: IPad Mini na iPhone 6 Plus? Izay mitady iPad Mini dia te hanana fivezivezena ary ny iPhone 5,5 Plus 6-inch dia manome ny filan'ny maro.
Any amin'ny farany, Atsofohy ny iPad Mini ary miloka amin'ny iPhone 6 Plus manana ny tombony ananany. Ny voalohany dia ny fitehirizana vola ary mora kokoa ny mividy mivantana ny iPhone 6 Plus noho ny iPhone 6 sy iPad Mini misaraka. Izy io koa dia gadget tsy dia kely loatra entina mitety tanana, fitaovana iray kely kokoa hampiahiahy ny famandrihana sns.
Fantatro fa misy maro izay maniry ny hanana roa, iray manokana ho an'ny zavatra tsirairay, na izany aza, fantatro ihany koa ny olona maro izay manana ny iPad Mini amin'ny fialamboly fotsiny (ireo fotoana ireo tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny rehefa mijery fahitalavitra) sy ireo tranga, Ny iPhone 6 Plus dia mampihetsi-po ny varotra iPad Mini.
Apple dia miala amin'ny antso ataon'ny iPad Mini
Rehefa namoaka ny iPad Mini voalohany i Apple, ny fitaovana ampiasainy dia ao ambadiky ny zokiny lahy. Ny iPad Mini 2 dia nitovy tamin'izy ireo saingy ny iPad Mini 3 indray dia mihemotra indray, mitazona ireo fitaovana mitovy amin'ny teo alohany fa manampy Touch ID ho an'ny tarehimarika maherin'ny 100 euro kokoa.
Fa maninona i Apple no nanapa-kevitra handicap ny iPad Mini? Ny iray amin'ireo roa, na te hampisondrotra ny varotra amin'ny iPhone 6 Plus (ny vokarinao voalohany) na ny olona tianao hitsambikina mankany amin'ny iPad Air 2.
Manakana ny fiovana mahery vaika amin'ny foto-kevitra momba ny iOS 9 ho an'ny iPad, tsy mieritreritra aho herintaona manomboka izao fa hanambara fitomboana lehibe amin'ny varotra iPad aho. Angamba hiadana ny fianjera nefa tsy maintsy miova be ny raharaha ka ny olona manomboka mahita ny takelaka Apple ho toy ny vokatra manaitaitra izay gaga.
Enga anie ilay honohono iPad Pro Manamarika ny fiandohan'ny tsingerina vaovao ho an'ny takelaka Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Rava ny fivarotana IPad, ampahany amin'ny tokony hanomezana tsiny ny iPhone 6 Plus?
Edgar olivera dia hoy izy:
izay raha ny hevitro
Valiny tamin'i Edgar Olivera
Alexander Vera dia hoy izy:
Azo antoka fa tsy maintsy atao, indrindra amin'ny fianjeran'ny mini iPad
Valiny tamin'i Alejandro Vera
Elpaci dia hoy izy:
Nanana ny fitaovana rehetra aho hatramin'ny fahazoako mampiasa azy ireo ary mijanona miaraka amin'ny iPhone 6 amin'ny 64 gigabytes sy iPad air 2 na iPad air 1 farafahakeliny 32 amin'ity iray ity aho, mazava ho azy
Valiny tamin'i Elpaci
Ny iPhone 6 plus dia marina fa manaisotra ny filàna takelaka izy, saingy very ny fahatsapana finday amin'ny habeny rehefa mitondra azy tontolo andro.
Xavi Couselo Lopez dia hoy izy:
Tsy maintsy mivoatra izy io. Ny iPad dia navela tao amin'ny iPhone lehibe ... izay tsy miantso. Ny iPad dia mila mivoatra amin'ny foto-kevitra momba ny orinasa.
Valiny tamin'i Xavi Couselo Lopez
Maria Victoria Gil Nieto dia hoy izy:
Hividy ny rivotra ipad aho, fa amin'ny iphone 6 plus manana be dia be aho
Valiny tamin'i María Victoria Gil Nieto
Jose alonso dia hoy izy:
Tena mieritreritra aho fa raha misy fiatraikany amin'ny iPhone 6 plus, satria manana ny ahy aho dia saika tsy nokasihako ny iPad Air aho, ary resaka fanazarana ny habeny ihany no hitondrako azy tontolo andro
Valiny tamin'i Jose Alonso
Sintomy ny sary OS X Yosemite ho an'ny iPad anao